Zinedine Zidane oo dulqaadku ka dhammaaday xilli uu amray in sideedaan ciyaaryahan laga diro Real Madrid | Ciyaarside.com
Zinedine Zidane oo dulqaadku ka dhammaaday xilli uu amray in sideedaan ciyaaryahan laga diro Real Madrid
Dulqaadka ayaa ka dhammaaday tababare Zinedine Zidane wuxuuna haatan doonayaa inuu nadiifiyo kooxdiisa Real Madrid – Zidane ayaana lagu soo waramayaa inuu u gudbiyey madaxweynaha Los Blancos Florentino Perez liiska 8 xiddig oo uu doonayo in la iibiyo xagaaga soo aadan.
Real Madrid ayaa haatan u muuqata in aysan difaacan karin horyaalka La Liga xilli ciyaareedkaan, maadaama ay 10 dhibcood ka dambeyso hogaamiyeyaasha Barcelona.
Dhibaatada kooxda waxaa ugu wacan xiddigaheeda waa weyn oo aan qaab ciyaareed wanaagsan ku jirin, waxaana ka mid ah Cristiano Ronaldo iyo Karim Benzema, halka Gareth Bale uu dhaawacyo la dhibtoonayo.
Tababaraha Faransiiska u dhashay Zidane ayaana wuxuu doonayaa inuu 8 ciyaaryahan ka diro Real Madrid isla markaana kooxda keeno bedelkeeda. Difaacdeyaasha koobka UEFA Champions League ayaana lala xiriirinayaa xiddigo ay ka mid yihiin Harry Kane, Dele Alli, Kylian Mbappe iyo Neymar JR.
Shabakadda Diario Gol ayaa sheegeysa, in Los Blancos ay bisha Jannaayo 2018ka iska iibineyso Lucas Vazquez iyo Dani Ceballos, halka Marcos Llorente, Kiko Casilla, Achraf, Vallejo, Bale iyo Luka Modric dhammaantood kooxda laga diri doono xagaaga soo aadan.
Xitaa mustaqbalka tababare Zidane ayaa shaki ku jiraa, maadaama Real Madrid ay natiijooyin xun soo xareysatay kulamadeeda horyaalka La Liga, Sabtidii waxay barbardhac la gashay Atletico Madrid kulankii Madrid derby.